Hugawng kachin(Jinghpaw,singpo,jingphosu): အတင်းအဓမ္မလုပ်၍ ငြိမ်းချမ်းရေးကို မရနိုင် (interview- RFA video click on link)
အတင်းအဓမ္မလုပ်၍ ငြိမ်းချမ်းရေးကို မရနိုင် (interview- RFA video click on link)
at 1/30/2013 08:42:00 AM
အတင်းအဓမ္မလုပ်၍ ငြိမ်းချမ်းရေးကို မရနိုင်
အစိုးရအနေနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးကို တကယ်လိုလားရင် ကေအိုင်အိုဌာနချုပ် လိုင်ဇာမြို့ကို တပ်တွေဝိုင်းထားပြီးမှ ငြိမ်းချမ်းရေးကို လည်ပင်းညှစ်ပြီးတော့ စားပွဲပေါ်ကိုအတင်းအဓမ္မ လာစေတဲ့ နည်းလမ်းမျိုးဟာ စစ်မှန်တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး မဟုတ်ဘူးလို့ ကချင်ငြိမ်းချမ်းရေး ကွန်ယက်အဖွဲ့က ဒေါ်မေစပယ်ဖြူက RFA ကိုပြောပါတယ်
Hugawng Kachin shared Wp Hkaw Hkam 's post .
Myanmar Police Used Phosphorus on Protesters, Lawy...
KACHIN WAR : Burmese army used Chemical Weapons ag...
Masha kaja n kaja masat ai lam
ahkyak dik ai shiga
ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ မှ ပညာရှင် ၂ ဦး၏ ကမ္ဘာကျော် အဆိ...
The colonial war against the Kachins isawin-win ...
Onlyatricks to the world media,reality in Burma ...
KIO/KIA NINGBAW KABA A (53) LANG NA RAWT MALAN MUN...
Hkala hkrum ai myu tsaw share ninghkrin hpe tsi ru...
အတင်းအဓမ္မလုပ်၍ ငြိမ်းချမ်းရေးကို မရနိုင် (intervie...
Chyurum Wunpawng Sha Ni Yawng Hpang De
Hkayabum shiga mabyin loi mi jahta dat ai yaw
Kachin woman shot by government soldiers
Duty of Every Kachin to Boycott AGD Bank and Air B...
လိုင်ဇာကို သိမ်းရုံနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး မရနိုင်
ရခိုင်လူမျိုးတွေလဲ လက်နက်ကိုင်အင်အားတိုးချဲ့ ဖို့ ...
Langai sha re
Ndai majan gaw Thein Sein, Min Aung Lai hte Aung S...
NINGTAU AMU MADU SALANG GABA LANAN A NUMHTET GA.
celebrate 53rd Kachin Revolution Day on February 3...
hkyak hkyak shiga kahtet shang wa ai
Interview with Guy Horton (click on Video link)
အစိုးရနဲ့ KIO ငြိမ်းချမ်းရေး "o"ပြည်မြို့တော် ပန်ဆ...
Public Policy hpe shagreng wa yang kaja
Myen Asuya Simsa Lam Tam Committee Ningbaw U Awng ...
KIO, ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးလနန်အားBBC,သတင်းထောက်...
Duwa Hkun Sa givingaspeech on demonstration day ...
Protest in Norway against the Burmese government's...
မြန်မာအစိုးရ ထောက်လှမ်းရေး (၈)ဦးတရုပ်ရဲတပ်ဖွဲ့ ဖမ...
SHIGA SANG LANG
တပ်မတော်ကို နှစ်သက်ဆဲ ဖြစ်ကြောင်း ဒေါ်စုပြော (bbc N...
လိုင်ဇာအနီးရှိ KIA စခန်းများအား အစိုးရတပ်ဖွဲ့မှ ပြ...
BURMA ARMY OPERATE MILITARY COMMAND FROM CHINA SOI...
Burmese army ravaged KIA’s strategic hill after co...
MYEN DAP SHANG GASAT
WE WILL NOT GO DOWN( VIDEO CLICK ON LINK )
ဦး လှဆွေ ကို မကောင်းဘူး လို့ ဘယ်သူ ပြောလဲ....
Demonstrate in Denmark - 26/01/2013(click on Video...
ခါယာဘွမ် သည် KIA/O လက်ထဲတွင်သာ ရှိနေဆဲ
Myanmar civil war and Nobel Peace Price Laureate
Hka Ya Bum KIA ni yen kau sai shiga nteng
That cease-fire never went into effect, independen...
Yen kau ai post ni bai lu na matu Gasat na lam na ...
Myit npyaw mat sai
Kachin rebels cling to last stronghold amid Burmes...
ဦးလှဆွေ ကို ဝေဖန်သံများ......
Interview-BBC : Salang Kaba La Nan ( click on Vide...
THAILAND KACHIN COMMUNITY PROTEST FRONT OF US -CHI...
ကေအိုင်အေကို အပြုတ်တိုက်မည်၊ အမြစ်ပြတ်ချေမှုန်းမည်ဟ...
ဒေါက်တာ ဆိတ်ဖွား ဆိုတာ ကျွန်တော် ပါပဲ ခင်ဗျာ..
Burma Still Using Child Soldiers
Kachin FBR Good Life Club Counselor Killed by Burm...
မြန်မာ အစိုးရကို ကချင်ဒေသအတွက် လူသားချင်းစာနာ အက...
Laiza: Hkrit tsang hpa'' Ma kaji hte seng ai shiga...
Dap Awn Daju kaw nna shagrau mungga
KIA နှင့် သမ္မတ၊ လွှတ်တော်တို့အကြား ချောင်ပိတ်မိနေသေ...
Laiza Grup yin
Burma's ceasefire riddled with shot
Thailand Kachin ( video click on)
myit mada shara
ဘာကြောင့်လဲဆိုတာတော့ ဘယ်သူကမှ မတွေးကြပါဘူး
တပ်မမှူး၊ စကခမှူး ကတော်များ အလုပ်ရှုပ်နေ
ရုတ်တရက် ပေါ်လာသော ငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့
Maroi nni ai(ကချင် လူထုအပေါ် မြန်မာ စစ်တပ်၏ ရက်စက်စ...
144 နဲ့ ဦးပိုင်၊ ဝမ်ပေါင်ကို အကာအကွယ်ပေးလိုက်အပေါ်...
ကချင်ပြီးရင် “ဝ” အလှည့်လား( click on video)
Jesus Christ isalife of witness (Nepali Army in ...
မြန်မာစစ်တပ် အချင်းချင်းမှားယွင်းပစ်ခတ် တပ်ကြပ်ကြီ...
ရှက်တတ်ရင် လဲသေဘို့ကောင်းသော လွှတ်တော်အမတ်များ နှင့...
KIA တပ်စခန်းများကို ထပ်မံအရှိန်မြှင့်ထိုးစစ်ဆင်
လိုင်ဇာမြို့ရှိ ဒုက္ခသည်စခန်းတွင် ကလေးများ ၁၀၀ ကျော...
Laiza News: interview (video clickon)
ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်တာ KIA တဖွဲ့ဘဲ ခေါင်းမာပြီးကျန်တ...
ရဲဘော်များကို စိတ်ကြွဆေး ကျွေးပြီး အစိုးရ စစ်ဆင်နေ...